Tahriibayaal Afrikaan ah oo laga badbaadiyay badda u Dhaxeysa Talyaaniga iyo Libya – Radio Daljir
Maajo 31, 2015 3:33 b 0
Axad, May 31, 2015 (Daljir) — Waxaa Badda Mediterranean ee u dhexeysa dalalka Liibiya iyo Talyaaniga laga badbadiyay 24-kii saac ee ugu dambeeyay Tahriibayaal lagu Qiyaasay 4,200 oo Qof, sida laga soo xigtay Ilaalada Xeebaha ee Talyaaniga.
Muhaajiriintan ayaa watay 22 doomood iyadoo badankood waxaa lagu badbaadiyay biyaha dalka Liibiya, waxaana jira qaar badan oo gaaray xeebaha dalka Talyaaniga. Iyadoo saddex ka mid ah doomihii gaaray dalka Talyaaniga laga heley 17 qof oo Mayd ah, iyadoo ay 217-qof oo kalena ay nolol ku gaareen.
Badbaadinta Tahriibayaasha ayaa waxaaa ka qayb-qaatay ciidanka Badda dalalka Jarmalka iyo Ireland. Iyadoola sheegay in kumannaanka muhaajiriinta ah ee laga badbaadiyay badda ay isugu jireen Afrikaan iyo Carab u badan Suuriyaan.
Tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo Midowga Yurub isku raaceen dhawaan in laga hortago qulqulka tahriibayaasha galaya dalka Talyaaniga; iyagoo xusay inay beegsanayaan kuwa dadka tahriibiya.
Hay’adda IOM ayaa Shaacisay inay 1,826 ku Geeriyoodeen Sanadkan lagu jiro ee 2015-ka Badda Mediterranean-ka, xilli ay Isku-dayay in ay galaan Waddanka Talyaaniga oo ka mid ah Qaaradda Yurub.
Ugu dambeyn, Qaramada Midoobay ayaa iyaduna qiyaas ay soo saartay ku xustay in bilihii Jannaayo illaa Abriil Sannadkan 2015-ka ay Baddaas ku Geeriyoodeen in ka badan 40,000 oo Tahiibayaal ah.